पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मतदान गर्ने, कुन पार्टीलाई भोट हाल्दैछन् ? - Enepalese.com
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मतदान गर्ने, कुन पार्टीलाई भोट हाल्दैछन् ?
इनेप्लिज २०७४ वैशाख २९ गते १३:३६ मा प्रकाशित
काठमाडौं, २९ वैशाख । झण्डै दुई दशकपछि यही वैशाख ३१ गते हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले मतदान गर्ने भएका छन् ।
निर्मल निवास स्रोतका अनुसार शाहले यसबारेमा आफू निकट सहयोगीहरुसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार यसपटक उनको रोजाईमा कमल थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपा एमाले परेका छन् ।
पछिल्लो समय यी दुई पार्टीहरुले राष्ट्रियताको पक्षमा लिएको अडानका कारण पनि पूर्वराजा शाहलाई यी पार्टीको पक्षमा भोट हाल्ने ईच्छा जाहेर भएको स्रोतको दाबी छ ।